Sawirro: Maxaa ka mid ahaa qodobada ay hadleen Farmaajo iyo Moussa Faki? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Maxaa ka mid ahaa qodobada ay hadleen Farmaajo iyo Moussa Faki?
Sawirro: Maxaa ka mid ahaa qodobada ay hadleen Farmaajo iyo Moussa Faki?
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida aan horay u sheegnay waxaa magaalada Muqdisho booqasho aan la shaacin ku yimid Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamad, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kusoo dhoweeyay Ra’isal wasaaraha Somalia.
Intaa kadib Madaxweynaha Somalia Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa madaxtooyada Somalia ku qaabilay guddoomiyaha Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen ammaanka iyo caawinta dadka Soomaaliyeed ee Abaarta ay ragaadisay.
Madaxweynaha waxa uu Guddoomiyaha ka dalbaday in kaalin muuqata ay ka qaatan Amniga waxa uuna sheegay in Dowladiisu ay go’aan satay in kaalinta koowad lasiiyo amniga.
Moussa Faki Mahamad ayaa soo dhaweeyay waxa uuna dhankiisa ka sheegay inay laba jibaari doonaan hanaanka lagu adkeynaayo amniga.
Moussa Faki Mahamad waxa uu dhankiisa Madaxweynaha ka dalbaday inuu ka laabto go’aanka lagu dada jinaayo bixitaanka Ciidamada AMISOM maadaama amniga Somalia uusan cago wanaagsan ku taagneyn, inkastoo Madaxweynaha uusan ka jawaabin qodobkaasi.
Safarka Moussa Faki Mahamad ayaa noqonaaya kii ugu horeeyay oo uu ku yimaado Somalia, tan iyo markii loo doortay Xilkaasi bishii January ee sannadkan.